Ukuhlukunyezwa kwe-TheOneSpy nokuhlukumeza kwabazali be-Digital
Sitshele! uma uhlolwe ngokumelene nentando yakho.
Isevisi ye-TheOneSpy ingasetshenziselwa ukukhulisa izingane nge-digital.
Abaqashi bangayisebenzisa ukuqapha amadivayisi anemikampani ngokumelene nabasebenzi abanemvume ebhaliwe.
TheOneSpy ayikwazi ukusetshenziswa ukubhekwa kwabantu ngokungalungile nangokungahambisani nokuphulwa kwenqubomgomo kwaphela ukuqedwa kwe-akhawunti ye-violator.
TheOneSpy ayikhuthazi futhi ngeke isetshenziselwe ukuqapha abanye abantu ngasese, okuwukuphula umthetho ubumfihlo.
Uma-ke uma amadivaysi akho eqashwe ngumuntu osebenzisa isofthiwe yeTheOneSpy ngaphandle kokuthatha imvume yakho, ungabika ukuhlukunyezwa / ukuhlukunyezwa lapha futhi nje udinga ukuhlinzeka ngolwazi olubalulekile. Izikhathi ezilandelayo zokukhathazeka kwakho ezifakiwe ziphelile ngokuqeda izinsizakalo zokuqapha zomsebenzisi futhi vimba i-akhawunti ye-violator. Singakujabulela ukukusiza ngokusebenzisa i-TheOneSpy ngezinhloso ezingekho emthethweni futhi sizokujabulela ukukutshela indlela eqhubekayo yokususa lesi sigameko ukuthi senzeke futhi.
Ukuze uqinisekise ukuthi ungumuntu, sicela uxazulule ukulingana: I-26 + 4 =?